Maayar Jiciir Oo Wareegtadii Madaxweyne Axmed Siilaanyo Ka Soo Saaray Dhulka Xisbiga Ku Tilmaamay Mid Baal Marsan Nidaamka Dawladnimo(Hadhwanaagnews) Saturday, October 06, 2012 Hargaysa( HWN )-Maayarka caasimadda Hargaysa Md. Xuseen Maxamuud Jiciir, ayaa sheegay inuu la yaabay markii uu arkay war-saxaafadeedkii madaxweyne Axmed Siilaanyo
Hargaysa( HWN )-Maayarka caasimadda Hargaysa Md. Xuseen Maxamuud Jiciir, ayaa sheegay inuu la yaabay markii uu arkay war-saxaafadeedkii madaxweyne Axmed Siilaanyo uu ku joojiyay hawshii ay ka wadeen suuqa Gobonimo, waxaanu xusay inuu qoraalkaasi ka dheeraa hanaanka dawladnimo. Maayar Jaciir waxa uu sheegay inay joojiyeen dhisamayaashaas ay ka wadeen xarunta xisbiga, balse ay arintaas kala kulmi doonaan madaxweyne Axmed Siilaanyo, waxaanu maayarku ka waramay markii ay rarayaan dadka degnaa agagaarka gurigii Xisbiga waxyaabii ay kala kulmeen.
Waxa uu maayar Jiciir mawduucan kaga hadlay waraysi gaar ah oo uu siiyay wargaysaka Geeska Afrika, ugu horayntii wargaysku waxa uu waydiiyay bal goobtan uu madaxweynuhu joojiyay ee ay hawlgalka ka wadeen ka dawlad
hoose ahaan waxay ka dhisayeen, waxaanu yidhi ? Meeshaas waxanu ka dhisaynay way cadayd, oo waxaanu u dhisaynay dadkii danyarta ahaa ee laga raray suuqa weyn ee magaalada. Waxaanan dadkaas u kala saarnay suuqa Gobanimo iyo Inji, markaas dadkaas waxaan u kala saarnay dad danyar ah iyo kuwo wax maalgashan kara oo ay ahayd in looga dhiso qolal afar afar mitir ah, kuwa danyarta ahna inaan annagu ka dawlad hoose ahaan hangaro u samayno.?
Maayarku isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi ?Markaas suuqa Gobonimo waxa la dajin lahaa 230 ganacsato ah oo maalgashi noqon lahaa iyo ilaa 300 oo dadka danyartaa oo aan u samaynaynay hangaro ay ku hoos ganacsadaan. Meeshan Xisbigana wax weyn ayaa naga qabsaday oo waxa ka dhisnaa buulal iyo sandaqado qashin ah oo Daroogada iyo Khamriga lagu iibiyo, waliba maalintii hore ee aan hawlgalka samaynay dhaqam xumo badan ayaanu meesha ugu tagnay. Dad danyar ah oo xaasas ahaan u deggenaa meesha waa ay jireen iyo kuwo maqaaxiyo ku lahaa meesha, dhamaantoodna waanu kala saarnay oo dadkii meheradaha ku lahaa meeshan ayaanu ku nidhi maalgashada oo waa ay ku jireen lacagtiina way bixiyeen, kuwii reer ahaan ugu jirayna ee masaakiinta ahaana waanagii waagii dhawayd Sheekh Cumar dajinay ee raacinay qoladii dhismaha gobalka laga raray.?
Maayar Jaciir oo uu wargaysku su?aalay bal sida uu u arkay war-saxaafadeedkii uu madaxweynuhu soo saaray maalintii ay hawlgalka fuliyeen habeenimadeedii waxa uu yidhi ? War-saxaafadeedkan uu madaxweynuu soo saaray, aniga subaxnimadii uun baa lay sheegay oo habeenkii maan arag, waanan la yaabanay, maxaa yeelay waxa ay ahayd inuu madaxweynuu warqad soo qoro ama wasiirkiisa daakhiliga ayuu la hadli lahaa ama annaga ayuu nala soo hadli lahaa, nidaamka dawladnimana warqado ayaa laysugu jawaabaa, markaas maan fahmin. Waanan joojinay dhismayaashaas oo madaxweynaha ayaanu ixtiraamnay, dadkana waanu dajinay oo waxaanu ku nidhi madaxweynaha ayaan is arkaynaa.?